Clotaire II - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Clothaire II)
I Clotaire II, tenenina hoe Tanora (amin'ny fiteny frantsay Le Jeune), teraka tamin'ny lohataonan'ny taona 584 ary maty tamin'ny 18 Oktobra 629, dia mpanjakan'i Neostria (Neustrie) tamin'ny 584 hatramin'ny 613 ary mpanjakan'ny Franca tamin'ny 613 hatramin'ny 629, teo aorian'ny fandresen'i Aostrazia. Zanak'i Chilpéric I sy i Fregonde, mpanjakan'i Neostria izy.
Zanak'i Chilpéric I sy i Fregonde, Lasa mpanjakan'i Neostria i Clotaire tamin'izy efa-bolana. Mba tsy hisy hamono azy toy ny zandriny sy ny zokiny, natsangana tany amin'ny Villa Royale-n'i Vitry any amin'ny faritan'i Artois (Frantsa) izy. Tsy nahazo anarana izy tamin'izy teraka ; tsy nahazo anarana avy hatrany i Clotaire tamin'izy teraka, mba tsy hisy ahiahy momba ny evan-anarana merovinjianina. Tsy natao batisa avy hatrany izy.
Tamin'ny Septambra 584, novonoina i Chilpéric Voalohany tanatin'ny Villa-ny any Chelles, mety baikon'i Brunehilde io, avy nihazana. Nampikorontana ny fanjakana io fahafatesany io. Mandroba ny vakok'i Chilperic ny Ben'i Neostria, indrindra ny missorium volamenan'i Chilperic ary naka ny taratasy izareo ireo, lasa nandositra tany Aostrazia izy ireny avy nandroba.
↑ Bruno Dumézil, La reine Brunehaut (Mpanjakavavy Brunehaut), Paris, Éditions Fayard, 2008, pejy 212.
↑ Frédégaire, Krônika, III, pejy 93.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Editing Chlothar II
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Clotaire_II&oldid=602110"
Voaova farany tamin'ny 11 Martsa 2013 amin'ny 10:54 ity pejy ity.